NAQSHAD CAD: SIDA LOO WAJAHO DHIRTA GUDAHA, SAWIRRADA CAYAYAAN, NUUCYADA ORCHIDS EE GURIGA, IYO SIDOO KALE SIDA LOOGA TAKHALUSO CAYAYAANKA UBAXA BEERTA? - SOOSAARKA DALAGGA
Sidee loola tacaalaa aphids cad ee dhirta gudaha iyo beerta? Sawiro wax ku ool ah iyo sawir cayayaan ah
Aphid - cayayaanka yaryar ee jidhka oo aad u sarreeya, calool gariir badan iyo lugaha dheer. Inta badan xannaaneeyayaasha waxay ku dhacaan aphids cad, laakiin waxaa jira noocyo badan oo kale oo badan, caarad iyo kan aan lahayn.
Aphid cad waa cayayaanka yaryar iyo cayayaannada khatarta ah ee dhirta gudaha iyo beerta. Hooyo kasta oo mar uun la kulmi karta dhibaato la mid ah, maxaa yeelay aphid waxay si fudud u galeysaa guriga ama guriga. Waa muhiim inaad si dhakhso ah u ogaato cayayaanku oo si sax ah u dhaqmaan. Aan ka hadalno arrimahan maqaalkan.
Waa maxay nooca cayayaanka ee ay tahay iyo sababta ay khatar u tahay?
Aphids waa cayayaanka lakabka ah oo cad, oo aan ka badnayn nus-mitir dhererka. Waxay ku dhacdaa kolley iyo kan aan lahayn.
Aphids barafka ayaa u guuri kara dhir kale.. Cayayaanka aan cirridka ahayn ayaa si wayn u dhufanaya. Aphids waxay ciribta caleemaha waxayna nuugaan casiirka nafaqada leh, qaadashada nafaqooyinka dhirta iyo abuurista caabuq faafa bakteeriyada (waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan waxa aphids ah ee laga helo maaddadan).
Xaggee bay dhirtu ka timaaddaa iyo waxa dhirta ah?
Badanaa aphid waxay gashaa qolka dhirta kale. Waxay noqon kartaa bouquet ah ubax la jaray ama ubax qaba cudurka iibsaday. Mararka qaarkood cayayaanka ayaa u duuli kara qolka inta lagu jiro hawada.
Si loo ogaado aphids, caleemaha iyo asliga ah waa in laga baaraa gudaha, halkaasoo dhedigga ukumo. Dareerka wuxuu u egyahay lakab cad oo yaryar.
Cagaarshowga cad wuxuu ku dhiciyaa dhirta dicotyled, xayawaanka ayaa si gaar ah ugu nugul weerarka. Abheeerada cad waxay ku dul wareegaan geedaha pistachio.
Xaaladaha wanaagsan ee dhalmada ee cayayaanka waa carrada qalalan iyo heerkulka sare.
Eeg sida cayayaanka u muuqdaan sawirka:
Sidee looga takhalusaa cayayaanka ubaxyada gudaha?
Si loola dagaallamo aphids on dhirta indoorka ah waxay isticmaalaan alaabooyinka warshadaha iyo daaweynta dadka.
Si buuxda amaan loogu talagalay daawada aadanaha ee laga sameeyay waxyaabaha qashinka ee shimbiraha. Fitoverm uma baahna ka saarista dhirta dhismaha.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu milmo 2 ml oo daroogada ah 200 ml oo biyo ah heerkulka qolka. Ku shub xal xalka uumiga iyo si taxadar leh ku buufin ubaxa.
Waxyaabaha noolaha ayaa saameyn xun ku yeeshay cayayaanka, laakiin kuma uruurin unugyada dhirta. Waxay u shaqeysaa sidii xiriir ah marka lagu buufiyo dusha sare ee cayayaanka, iyo marka lagu sii daayo mindhicirada markaad cunayso dhirta la daweeyay.
Ka dib 10-15 saacadood, aphids waayi karaan awoodda ay ku quudiyaan. Si loo saxo natiijada, waxaa lagu talinayaa in lagu celiyo nidaamka 5-7 maalmood. Fitoverm wuxuu u shaqeeyaa si wax ku ool ah qol diiran oo qalalan..
Waa wakiil dhexdhexaad ah oo khatar ah, qof gacmo gashana waa in la gashado marka loo isticmaalo daroogada.
Si aad u diyaariso xal, isku dar 8 g oo ah walaxda firfircoon ee leh litir oo dareere ah. Inta lagu jiro ka shaqeynta, qaado ubaxa balakoonka ama waddada.
Aktar waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro waraabinta ama buufinta dhirta. Daroogadu waxay galeysaa jirka cayayaanka, taas oo keenta curyaanimo iyo dhimasho. Saddex wiig ka dib waxaad u baahan tahay inaad dib u sameysato ubax si aad u xaqiijiso natiijada.
Aktara waa qabatimid, waa in la beddelo daroogada cayayaanka kale.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan habka loo isticmaalo si loola dagaallamo aphids:
Daaweyn wax ku ool ah, waxay bilaabmaysaa in ay wax ka qabato marka la xereeyo. Actellic wuxuu dilaa aphids hal isticmaalka..
Actellic waa daawo aan nidaam ahayn oo wax ka qabanaya oo kaliya cayayaanka oo aan geli karin unugyada dhirta. Saameyntii macneheedu waxaay kordhineysaa xaaladaha kuleylka iyo qoyaanka hawada kordhaya.
Isku buufinta Actellic qiyaasta 2 ml litir oo biyo ah. Aktely waa sun, waa suurtagal in la buufiyo joogitaanka xayawaanka iyo carruurta. Waa inaad xirataa gacmo-gashi iyo maaskaro, daaweynta waa in lagu sameeyaa kaliya balakoonka ama waddada oo ka fogow taabashada maqaarka.
Macno, guriga lagu kariyey
20 g oo dhir udgoon 250 ml oo biyo nadiifa ah.
Ku adkeyso ilaa 24 saacadood karkari.
Maadada qabow, cadaadis iyo ku dar saabuun.
Soodhaha iyo milixda.
Hal litir oo biyo ah oo aad u baahan tahay 1 qaado oo lacag ah.
Isku qas walxaha oo buufin geedka.
In litir biyo ah kala diri 5 ml ammonia, walaaq, ku dar saabuun.
Isku duri ubaxa, hayso saacad badh, biyo raacina biyo si aad uga fogaato gubashada.
Ash geed. Hal koob oo ka mid ah maaddada ku shub 5 litir oo biyo ah, ku dar 25 g saabuun oo ku buufin xalka maalintii.
Qoraxda. Qandhada Spoon qasi ee litir oo biyo ah iyo geeddi socodka geedka laba jeer maalintii.
Baro wax badan oo ku saabsan hababka dadweynaha ee wax ka qabta aphids halkan.
Xakamaynta cayayaanka ee orchids
Aphid waa khatar ah orchids, waxay ku faaftaa dhammaanba dusha sare ee dhirta laga bilaabo asliga ah si ubaxyada ubaxyada.
Cayayaanka waa sahlan tahay in lagu garto patina cad.. Waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo meelaha qarsoon - saldhiga caleemaha, burooyinkeeda, dhinaca dambe ee caleemaha.
Badanaa waxay kudhicdaa orchid muuqaalka qolka fuuqbaxa. Qoyaanka waa in lagu hayaa 60%.
Waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo buufiyo caleemaha iyo asliga ah biyo qabow, ka fogaanshaha isu-ururinta dareeraha ubaxa, iyo waqtigaa bacrimiya geedka.
Orchids Infected waa in isla markiiba laga soocaa dhirta kale ee gudaha, maadaama si deg deg ah loo neefsado.
Habka ugu fudud ee halganka waa inuu si fiican u dhaqo ubaxa iyo ka saar qaybaha waxyeellada leh.
Antiseptic ee warshad iyo waxyeello loogu talagalay dulinka ayaa ah talaabada xalinta saabuunta.
Faafidda aphids ayaa sidoo kale ka caawisaa dagaalka lafdhabarta. Si aad u sameysid, waxaad u baahan tahay 100 g oo ah loosh, liin ama xayawaan lagu qasi karo litir biyo ah oo karkaraya saddex maalmood. Wixii saameeyn weyn, waxaad ku ridi kartaa qaboojiyey qashinka dhulka.
Aphids ayaa si xun u falcelisa saliidaha lagama maarmaanka ah. U qalmida daaweynta orchids waa geedka shaaha, lebbiska iyo Saliida geedka saliidda. 30 dhibcood oo saliid ah waa in lagu kala diraa 500 ml oo biyo ah oo ku daboola weelka warshadda.
Haddii hababkani aysan shaqeynin, waa inaad isticmaashaa macdanta kiimikada. Wixii orchids, Aktara, Fitoverm, Neoron, Fosfomit ama Aktellik ayaa ku haboon.
Waa inaadan wax ka badan saddex daaweyn oo daawo isku mid ah.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loola tacaalo aphids ee orchids waxaa laga heli karaa maqaalkeena.
Sidee loola dagaallamayaa beerta?
In beerta, aphids inta badan saamayn caleemaha dhalinyarada iyo burooyinkeeda.. Caleemaha iyo jirridaha ay saameeyeen aphids waxay leeyihiin dusha sare, sababtoo ah cayayaanka qarsoodi ah ee ur kulul - suuf oo soo jiidata quraan.
Hal dariiq oo ah wax ka qabashada aphids ee beerta waa iyada oo la shaqeynayo. Tani waxay ku haboon tahay inaad isticmaasho tuubada biyaha. Iyadoo caawimaadda cadaadiska adag waxaad ka saari kartaa aphids iyo dirxiga, si fiican u dhaqo caleemaha. Gacmaha waa in laga saaraa dulin oo keliya gacmo gashi.
Habka bayoolojigu waa hab nabadgelyeed oo lagu dilo aphids. Dagaalyahannada ugu fiican ee cayayaanka ayaa loo tixgeliyaa ladybugs iyo dahab dahabi ah, waxaad ka iibsan kartaa dhowr qof oo dukaamo khaas ah (wixii cayayaanka kale cuno aphids, halkan ka akhri, iyo qodobkan waxaan u sheegnay sida ladybirds ay ula dagaalamaan aphids). Waxaad kaloo soo jiidi kartaa shimbiraha beerta adoo isticmaalaya quudinta. Tits, Linnet iyo Sparrows way ogyihiin sida loola tacaalo aphids.
Beerta ku habboon waxay ka caawisaa ka hortagga muuqaalka aphids - cayayaanka waxaa lagu celiyaa basasha iyo toon, iyo sidoo kale Chamomile Dalmatian.
Waxaan ku soo bandhigeynaa fiidiyoow ku saabsan sida loola tacaalo aphids beerta:
Tallaabooyinka ka hortagga guud
Wixii dhirta guriga:
Ubaxyo liito ayaa ugu nugul weerarka dulin.
Waa lagama maarmaan in si dhakhso ah looga saaro caleemaha qallalan iyo lafdhabarta.
Ubax cusub waa in loo diraa karantiil.
Ha dhicin dhirta.
U hubso inaad ka takhalusto quraanjada oo aad dooratid goobaha cirifka leh iftiinka qorraxda.
Ka hor inta aadan ku beerin dheri cusub, ubaxa waa in la nadiifiyaa.
Toddobaadkiiba laba jeer si ay u baaraan dhammaan dhirta guriga, si joogto ah ugu biyo raaci biyo.
Wixii ubaxyada beerta:
Cawska si nidaamsan nadiif ah.
Xilliga xagaaga, burburinta dabiicadaha. Tani waa in la sameeyaa, sida quraanjada si kasta oo ay u ilaaliyaan aphids iyo xitaa naftooda u keeno beerta (ka sii akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan symbiosis ee cayayaanka halkan).
Guga in ay sameeyaan manjooyin nadaafadda dhan dhirta.
Ka hor inta gaysashada, dhirta miraha lagu buufiyo iyo ubax afkoda leh cayayaanka kaneecada.
Ha ku dhaafin nitrogen.
Ku dhaq dhirta tuubada.
Goobaha guriga iyo beerta waxay u baahan yihiin fiiro iyo daryeel joogto ah. Waqtiga si aad u fuliso tallaabooyin ka hortag ah iyo kormeerka caafimaadka iyo xaaladda dhirta, waxaad iska ilaalin kartaa badi xumaatooyinka la xiriira cayayaanka. Haddii xaalka astaamuhu ay si lama filaan ah u seegaan, waxaa jira waxyaabo badan oo dabiiciga ah iyo kiimikooyin ah oo si fiican u caawin doona dagaalka lagula jiro dulin.